धनुषा, जेठ २३ गते । नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको दुई महिना पुग्न लागिसक्दा पनि धनुषाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीको हातमा नयाँ पुस्तक पुग्न सकेको छैन । जिल्लाभर नै कक्षा ६ र ७ को पाठ्यपुस्तक अभाव भएपछि अब पुराना पुस्तकको खोजी गरी त्यसकै सहारामा विद्यार्थीको पठनपाठन अगाडि बढाउने अभियान सरोकारवालाले सुरु गरेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नजिकैको दूरीमा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालय कुँवा रामपुरमा कक्षा ६ र ७ का कुनै पनि विषयका पाठ्यपुस्तक पुगेका छैनन् । अब विकल्प के त ? विद्यालयका सहायक प्रधानअध्यापक राजेन्द्र पञ्जियार भन्नुहुन्छ, ‘वरपरका कुनै विद्यार्थीसँग पुराना पाठ्यपुस्तक छन् कि भनेर खोजीमा जुटेका छौँ । एक महिनाभित्र पुराना पुस्तकको खोजी गरी कक्षा ६ र ७ मा अध्ययन गर्ने दुई सय विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु¥याउने योजना विद्यालयले बनाएको छ । डिलरले किताब नै दिएन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पनि जानकारी गराइयो तर हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो’, उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त विद्यालयमा यसै वर्ष मात्र झन्डै दुई सय विद्यार्थी निजी विद्यालयबाट आएका थिए । गाउँमा भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर विद्यार्थी बटुलियो तर विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ । उक्त विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आर्कषण बढाउन हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, शुक्रबारे प्रतियोगिता, हरेक महिना परीक्षा, खेलकुद प्रतियोगिता गरेर विद्यार्थीको सहभागिता वृद्धि गराएको थियो ।
जिल्लाको फुलगामा बाहिरीस्थित गिरिजामाध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने करुणकुमार राउतको हातमा पनि नयाँ पुस्तक पुग्न सकेको छैन । कक्षा ६ र ७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ४० सेट पुस्तक वितरण गरे पनि आधाभन्दा बढी विद्यार्थी पुस्तकबिहीन नै रहेको विद्यालयका प्रधानअध्यापक शितल यादव बताउनुहुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालय निरीक्षकलाई यस विषयमा जानकारी गराए पनि समस्याको समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अब तत्काल नयाँ पुस्तक पाउन नसकेको अवस्थामा पुराना पुस्तक सङ्कलन गरी विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको यादवले बताउनुभयो ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन्, कक्षा धान्न नै शिक्षकलाई धौ–धौ छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकबिना नै कसरी पढाउनु र गुणस्तरीयता कायम गर्नु ? प्रअ यादव चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक नपुगे पनि दर्जनौँ विद्यालयले नयाँ पुस्तकको बिल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गरेपछि अधिकारीहरू आश्चर्यमा परेका छन् । कक्षा ६ र ७ को पुस्तक बजारमा अभाव छ तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुस्तक खरिदको बिल आएपछि हामीले छानबिन प्रारम्भ गरेका छौँ, धनुषाका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्णले बताउनुभयो ।
जिल्लामा ६ र ७ कक्षामा १० हजार ६४६ जना विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्कका आधारमा सोहीअनुसारको बजेट आएको छ । यसपटक पाठ्यपुस्तकमा दुई करोड रुपियाँ खर्च नभएको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । जिल्लाका विद्यालयले विद्यार्थीको हातमा नयाँ पुस्तक थमाउन नसके पनि विद्यालयले जिशिका पुस्तक खरिदको बिल पठाउन थालेपछि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको सिफारिसलाई जिशिकाले अनिवार्य गरेको छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल विद्यार्थीको हातमा ढिलै भए पनि पाठ्यपुस्तक पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ । नयाँ कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पुस्तक पु¥याउनु सरकारको दायित्व हो, हामी त्यसमा क्रियाशील छौँ, महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो । विद्यालयले पुराना पुस्तकको खोजी गरेर पठनपाठन अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै विद्यालयमा पुराना पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गर्ने तर पुस्तक खरिद गरेको बिल जिल्ला शिक्षामा पठाउने काम भने विद्यालयले गर्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पुस्तक नभए पनि पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताउनुभयो । ज्ञानको क्षितिज फराकिलो भएको बेला शिक्षकले आफनै अनुभवका आधारमा पढाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अनुभवी शिक्षकले किताब नआएसम्म व्यावहारिक हिसाबबाट भए पनि पठनपाठन अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पुराना पुस्तकको प्रयोग पनि यसको विकल्प भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।